IPodcast 12 × 27: Sihlalutya umsitho weApple | Ndisuka mac
Izolo episode # podcastApple episode yayinzima kakhulu xa ujonga isixa se iindaba ezithi iApple yazisa ngeeyure ngaphambili. Ngale ndlela sinokuthi nangaphezulu kunokuba besilindele.
Inkampani yaseCupertino ibeke "yonke inyama kwi-grill" ngokufika kwePodcast ephuculweyo, eyongeza ukubhaliswa okuhlawulelweyo, i-Apple TV entsha, ukufika okusemthethweni emva kweminyaka eliqela yamarhe ii-AirTags, iMac entsha, i-iPhone 12 kunye ne-12 Pro emfusa kwaye kunjalo i-11-intshi kunye ne-12,9-intshi ye-iPad Pro ene-mini-LED kunye neprosesa ye-M1 ngaphakathi.
Siqinisekile ukuba ngaphezulu komnye wababekhona wothuswe linani leemveliso ezisungulwe izolo, kodwa intetho enje sele idlala. Kwiyure enye yomsitho sabona iindaba ezilungileyo ezimbalwa kwaye apha sixoxa ngazo zonke noogxa kwi-Actualidad iPhone:
Le yikhonkco ongena kuyo itshaneli yethu yeYouTube kwaye ungasilandela kwisiqendu esilandelayo siphile okanye ungonwabela ipodcast epapashwe kuyo iTunes (kwezi yure zimbalwa zizayo) ukuyimamela nanini na kwaye naphi na apho ufuna khona. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso kwaye ucinga ukuba singaphawula ngayo kwi-podcast ungayenza bukhoma ngengxoxo efumaneka kwi-YouTube, usebenzisa i-hashtag#podcastapple kwi-Twitter okanye ukusuka Ijelo lethu leTelegram Kufuneka kuqatshelwe ukuba simahla kuwo wonke umntu kwaye baninzi ngakumbi kuthi.
Kwaye kwakhona kufuneka sibulele wonke umntu okhoyo kwinkampani yakho kolu luvo lukhulu, Abasebenzisi abaninzi bayahlangana nathi kwaye usibuza ngokuthe ngqo malunga netekhnoloji yeApple, iimveliso zayo kunye neminye imiba enganxibelelananga ngqo neApple. Okweqela kuyinyani Kuluyolo ukwabelana ngamava ethu onke nokwazi okwakhoSiyathemba ukuba olu luntu lwabasebenzisi luyaqhubeka nokukhula imihla ngemihla.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » IPodcast 12 × 27: Sihlalutya umsitho weApple
I-Apple TV 4K entsha iyasivumela, okokuqala ngqa, ukuba singene kwikhontrakthi yeApple Care +
I-Apple TV 4K ka-2017 iyeka ukuthengiswa kodwa isizukulwane se-4 se-Apple TV sihleli